ပြိုင်ပွဲစုံ (၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှုကို မန်ယူ ရပ်တန့်နိုင်မလား
အိမ်ကွင်းမှာ မဖြစ်မနေ နိုင်ပွဲပြန်ရှာရတော့မယ့် မန်ယူ
6 Oct 2018 . 4:33 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၈) စနေနေ့ပွဲတွေမှာတော့ အသင်းကြီးအချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲ မပါပေမယ့် ရလဒ်တွေ ဆိုးနေတဲ့ မန်ယူနဲ့ နယူးကာဆယ်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့် ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ရှိနေတယ်။ မန်ယူအသင်းက ပြိုင်ပွဲစုံ (၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်နေသလို နယူးကာဆယ်အသင်းက ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှ မရသေးပါဘူး။ ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ဒီနှစ်သင်း ဆုံတွေ့မှုမှာ ဘယ်အသင်းက ရလဒ်ကောင်း ရယူသွားမလဲဆိုတာာ . .
ဘန်လေ – ဟတ်ဒါဖီးလ် (စနေ ည ၈း၃၀)
ဘန်လေအသင်း ရလဒ်တွေ ပြန်ကောင်းလာပြီး ဘုန်းမောက်၊ ကာဒစ်ဖ်တို့ကို ဆက်တိုက် အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ ဟတ်ဒါဖီးလ်ရဲ့ အခြေအနေကတော့ တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားပါ။ အခုအချိန်အထိ နိုင်ပွဲမရသေးသလို ရမှတ်(၂)မှတ်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားအောက်ခြေမှာ ရပ်တည်နေရတယ်။ ခြေတက်နေတဲ့ ဘန်လေ အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးဖို့ မရှိပါဘူး.
ပဲလေ့စ် – ၀ုလ်ဗ် (စနေ ည ၈း၃၀)
ဒီရာသီမှာ တန်းတက်လာတဲ့ ၀ုလ်ဗ်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းမာကျောမှုကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ (၇)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ (၁)ပွဲပဲ ရှုံးထားသလို မန်ချက်စတာမြို့ခံ (၂)သင်းစလုံးကို သရေကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ပဲလေ့စ်ကတော့ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်း မတည်ငြိမ်ဘူး။ နိုင်ပွဲတွေ့လိုက် ပြန်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ကွင်းကစားပုံတော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဝေးကွင်းမှာ သရေတစ်မှတ် ရယူနိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ ၀ုလ်ဗ်ကို ပိုကြိုက်တယ်။
လက်စတာ – အဲဗာတန် (စနေ ည ၈း၃၀)
ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိပေမယ့် အဲဗာတန် ရုန်းကန်နေရဆဲပဲ။ (၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပြီးမှ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ဖူလ်ဟမ်နဲ့ပွဲမှာ နိုင်ပွဲ ပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။ လက်စတာအသင်းဟာ ကစားသမားကောင်းတွေကို (၁)နှစ် (၁)ယောက် လက်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး မဖြစ်သွားဘူး။ နိုင်သင့်တဲ့ပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်း ရယူလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် အိမ်ကွင်းဆို ခြေစွမ်း ပိုကောင်းတယ်။ သရေမျှော်လင့်ခွင့်ရှိနေတဲ့ လက်စတာကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်တယ်။
စပါး – ကာဒစ်ဖ် (စနေ ည ၈း၃၀)
ဒီရာသီ စပါးအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းက မနှစ်ကလောက် အားရစရာ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း Harry Kane ဂိုးပေါက် ပြန်တွေ့လာမှုနဲ့အတူ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပြန်ရနေပါတယ်။ ကာဒစ်ဖ်ရဲ့ အနေအထားကတော့ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာမရှိဘဲ တန်းမဆင်းရအောင် ရုန်းကန်ရဖို့ပဲ ရှိတယ်။ စပါးအသင်း အနိုင်သေချာပြီး (၂)ဂိုးလောက်နဲ့ အနိုင်ရသွားဖို့ ရှိတယ်။
၀က်ဖို့ဒ် – ဘုန်းမောက် (စနေ ည ၈း၃၀)
ရာသီအစ (၄)ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ၀က်ဖို့ဒ် အရှိန်ပြန်ကျသွားပါပြီ။ နောက်ဆုံး(၃)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့သလို (၁)မှတ်ပဲ ရခဲ့တယ်။ ဘုန်းမောက်ကတော့ နိုင်တစ်ခါ၊ ရှုံးတစ်လှည့်နဲ့ ရှေ့ဆက်နေတယ်။ နှစ်သင်းစလုံး ခြေစွမ်း မကွာပေမယ့် အိမ်ကွင်းအားသာချက်ရှိတဲ့ ၀က်ဖို့ဒ်ကို ရွေးချယ်ချင်တယ်။
မန်ယူ – နယူးကာဆယ် (စနေ ည ၁၁း၀၀)
မန်ယူအသင်းရဲ့ အနေအထားက တော်တော်လေး ဆိုးရွားနေတယ်။ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့သလို အိမ်ကွင်း(၄)ပွဲဆက်လည်း နိုင်ပွဲ မရှိခဲ့ဘူး။ စီနီယာကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho ကြား စည်းလုံးမှု မရှိသလို၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း အနာဂတ် မသေချာဖြစ်နေတယ်။ နယူးကာဆယ်ကတော့ မန်ယူထက် ပိုဆိုးတယ်။ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲစုံ (၈)ပွဲ ကစားပြီးချိန်မှာ တစ်ပွဲမှ အနိုင်မရခဲ့ဘူး။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ မန်ယူ မဖြစ်မနေအနိုင် ပြန်ရှာရမှာဖြစ်ပေမယ့် ပြတ်သားတဲ့ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာဖို့ မရှိဘဲ ဂိုးနည်းနည်းနဲ့ အနိုင်ရသွားမယ်လို့ ထင်တယ်။
Photo:TSJ101 Sports,Goal,Premier League
အိမျကှငျးမှာ မဖွဈမနေ နိုငျပှဲပွနျရှာရတော့မယျ့ မနျယူ
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၈) စနနေပှေဲ့တှမှောတော့ အသငျးကွီးအခငျြးခငျြး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့တဲ့ပှဲ မပါပမေယျ့ ရလဒျတှေ ဆိုးနတေဲ့ မနျယူနဲ့ နယူးကာဆယျတို့ ထိပျတိုကျတှမေ့ယျ့ ပှဲကောငျးတဈပှဲ ရှိနတေယျ။ မနျယူအသငျးက ပွိုငျပှဲစုံ (၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျနသေလို နယူးကာဆယျအသငျးက ဒီရာသီ ပွိုငျပှဲစုံမှာ နိုငျပှဲတဈပှဲမှ မရသေးပါဘူး။ ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ဒီနှဈသငျး ဆုံတှမှေု့မှာ ဘယျအသငျးက ရလဒျကောငျး ရယူသှားမလဲဆိုတာာ . .
ဘနျလေ – ဟတျဒါဖီးလျ (စနေ ည ၈း၃၀)
ဘနျလအေသငျး ရလဒျတှေ ပွနျကောငျးလာပွီး ဘုနျးမောကျ၊ ကာဒဈဖျတို့ကို ဆကျတိုကျ အနိုငျယူခဲ့တယျ။ ဟတျဒါဖီးလျရဲ့ အခွအေနကေတော့ တျောတျောဆိုးဆိုးရှားရှားပါ။ အခုအခြိနျအထိ နိုငျပှဲမရသေးသလို ရမှတျ(၂)မှတျနဲ့ အမှတျပေးဇယားအောကျခွမှော ရပျတညျနရေတယျ။ ခွတေကျနတေဲ့ ဘနျလေ အိမျကှငျးမှာ ရှုံးဖို့ မရှိပါဘူး.
ပဲလစျေ့ – ဝုလျဗျ (စနေ ည ၈း၃၀)
ဒီရာသီမှာ တနျးတကျလာတဲ့ ဝုလျဗျအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးမာကြောမှုကို အသိအမှတျပွုရမယျ။ (၇)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ (၁)ပှဲပဲ ရှုံးထားသလို မနျခကျြစတာမွို့ခံ (၂)သငျးစလုံးကို သရကေစားနိုငျခဲ့တယျ။ ပဲလစျေ့ကတော့ ဒီရာသီမှာ ခွစှေမျး မတညျငွိမျဘူး။ နိုငျပှဲတှလေို့ကျ ပွနျပြောကျလိုကျဖွဈနတေယျ။ အိမျကှငျးကစားပုံတော့ သိပျမဆိုးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အဝေးကှငျးမှာ သရတေဈမှတျ ရယူနိုငျစှမျးရှိနတေဲ့ ဝုလျဗျကို ပိုကွိုကျတယျ။
လကျစတာ – အဲဗာတနျ (စနေ ည ၈း၃၀)
ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိပမေယျ့ အဲဗာတနျ ရုနျးကနျနရေဆဲပဲ။ (၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့ပွီးမှ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျက ဖူလျဟမျနဲ့ပှဲမှာ နိုငျပှဲ ပွနျတှခေဲ့တယျ။ လကျစတာအသငျးဟာ ကစားသမားကောငျးတှကေို (၁)နှဈ (၁)ယောကျ လကျလှတျခဲ့ရပမေယျ့ ဆိုးဆိုးရှားရှားကွီး မဖွဈသှားဘူး။ နိုငျသငျ့တဲ့ပှဲမှာ ရလဒျကောငျး ရယူလရှေိ့ပွီး အထူးသဖွငျ့ အိမျကှငျးဆို ခွစှေမျး ပိုကောငျးတယျ။ သရမြှေျောလငျ့ခှငျ့ရှိနတေဲ့ လကျစတာကိုပဲ ရှေးခယျြခငျြတယျ။
စပါး – ကာဒဈဖျ (စနေ ည ၈း၃၀)
ဒီရာသီ စပါးအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးက မနှဈကလောကျ အားရစရာ မရှိဘူးဖွဈနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ အဓိက တိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျး Harry Kane ဂိုးပေါကျ ပွနျတှလေ့ာမှုနဲ့အတူ ရလဒျကောငျးတှေ ပွနျရနပေါတယျ။ ကာဒဈဖျရဲ့ အနအေထားကတော့ ထူးထူးခွားခွား ပွောစရာမရှိဘဲ တနျးမဆငျးရအောငျ ရုနျးကနျရဖို့ပဲ ရှိတယျ။ စပါးအသငျး အနိုငျသခြောပွီး (၂)ဂိုးလောကျနဲ့ အနိုငျရသှားဖို့ ရှိတယျ။
ဝကျဖို့ဒျ – ဘုနျးမောကျ (စနေ ည ၈း၃၀)
ရာသီအစ (၄)ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ဝကျဖို့ဒျ အရှိနျပွနျကသြှားပါပွီ။ နောကျဆုံး(၃)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့သလို (၁)မှတျပဲ ရခဲ့တယျ။ ဘုနျးမောကျကတော့ နိုငျတဈခါ၊ ရှုံးတဈလှညျ့နဲ့ ရှဆေ့ကျနတေယျ။ နှဈသငျးစလုံး ခွစှေမျး မကှာပမေယျ့ အိမျကှငျးအားသာခကျြရှိတဲ့ ဝကျဖို့ဒျကို ရှေးခယျြခငျြတယျ။
မနျယူ – နယူးကာဆယျ (စနေ ည ၁၁း၀၀)
မနျယူအသငျးရဲ့ အနအေထားက တျောတျောလေး ဆိုးရှားနတေယျ။ ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့သလို အိမျကှငျး(၄)ပှဲဆကျလညျး နိုငျပှဲ မရှိခဲ့ဘူး။ စီနီယာကစားသမားတှနေဲ့ နညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho ကွား စညျးလုံးမှု မရှိသလို၊ သူကိုယျတိုငျလညျး အနာဂတျ မသခြောဖွဈနတေယျ။ နယူးကာဆယျကတော့ မနျယူထကျ ပိုဆိုးတယျ။ ဒီရာသီ ပွိုငျပှဲစုံ (၈)ပှဲ ကစားပွီးခြိနျမှာ တဈပှဲမှ အနိုငျမရခဲ့ဘူး။ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ မနျယူ မဖွဈမနအေနိုငျ ပွနျရှာရမှာဖွဈပမေယျ့ ပွတျသားတဲ့ရလဒျထှကျပျေါလာဖို့ မရှိဘဲ ဂိုးနညျးနညျးနဲ့ အနိုငျရသှားမယျလို့ ထငျတယျ။